အန္တာတိကတိုက်ရှိ Larsen C ရေခဲတုံးကြီးကျိုးသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အန္တာတိကတိုက်ရှိ Larsen C ရေခဲတုံးကြီးကျိုးသည်
Image - NASA
ကျွန်တော်မကြာသေးမီကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြသည်အဖြစ် ဘလော့ဂ်နွေးထွေးနေသောအန္တာတိကတိုက်ကြီးသည်ရေခဲပြင်မဲ့ဖြစ်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရက်အတွင်း, ပြီးသားဟုခေါ်တွင်ထားပြီးအဘယျသို့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေခဲတောင်: အ Larsen C.
တန်တစ်ထရီလီယံအလေးချိန်ရှိသောသူအားလုံးသည်သူ့အားအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ယခုအဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ယခုအချိန်တွင်အန္တာတိကတိုက်သည်ထပ်တူထပ်မျှမရှိတော့ပါ၊ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ ၎င်း၏ရေခဲareaရိယာ၏ 12% ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်.
iceရာမရေခဲတောင်သည်ရေပေါ်သို့အကြာကြီးစီးသွားခဲ့သော်လည်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ယခုအန္တာတိကရေခဲဖုံးလွှမ်းမှုသည်အက်ကွဲခြင်းမဖြစ်ပေါ်မီကထက်တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးသည်ဟုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်များစိုးရိမ်နေ ရေခဲစိုင်အသစ်သည်ရေတိုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်.
Larsen C ၏ဖောက်ဖျက်မှုကို Larsen A ပလက်ဖောင်းသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ပြိုကျခဲ့ပြီး၊ ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လအထိ Larsen C အက်ကွဲသည့်အလျားသည်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုတိုက်ကြီးသို့ ၄.၅ ကီလိုမီတာအကျယ်ရှိသောရေခဲလိုင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဇူလိုင် ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိလုံးဝကွဲထွက်သွားသည်။
ပုံ - Businessinsider.com
ယခု မှစ၍ အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်။ အများအားဖြင့်ရေခဲတောင်သည်နောက်ဆုံး၌ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အပိုင်းအစများစွာအဖြစ်သို့ကူးစက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါက၊ အန္တာတိကတိုက်သည်ရေခဲကုန်သွားနိုင်သည်။
ဤဝမ်းနည်းဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Larsen C အက်တမ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သောဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ၏ Sentinel-1 ဂြိုဟ်တုနှင့် Aqua MODIS ဂြိုဟ်တုနှင့် Suomi VIRS တူရိယာတို့အားလည်းကောင်း၊ နာဆာကနေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » အန္တာတိကတိုက်ရှိ Larsen C ရေခဲတုံးကြီးကျိုးသည်
အကြီးမားဆုံး - Mega ငလျင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည်
အပူလှိုင်းအသစ်တစ်ခုကပြည်နယ် ၂၇ ခုကိုသတိပေးမှုပြုလုပ်